Gudoomiyaha cusub ee Burtinle oo maanta la kulmay golihiisa deegaanka – Radio Daljir
Maarso 9, 2013 5:06 b 0
Burtinle, March 09- Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal Liibaan Xirsi Khaliif ayaa maanta mar uu golaga kala qayb galay kalfadhigoodii caadiga ahaa waxaa uu hor dhigay shan qodob oo uu sheegay inuu ku dhaqadhaaqayo maamulka waxna uu ka qaban doono.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in shantaasi qodob uu golaha iyo shacabka ay ka wada qayb qaataan fulintooda.
Qodobada uu gudoomiyuhu hor dhigay golaha.
In dib u habayn lagu sameeyo dawladda hoose
abuurista qorshe siyaasadeed lagu wacyi galinayo bulshada deegaanka
Hormarinta qaadista canshuuraha iyo ilaalinta dakhliga degmada
Xoojinta maamulka iyo ciribtirka jahwareerka maamulka soo kala dhex gala
Iyo in jawi wada shaqayneed laga dhex abuuro maamulka gudihiisa isfahanna laga dhex dhaliyo maamulka iyo golaha.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in mamaulkiisa waxyaabaha diiradda uu saarayo ay ka mid yihiin dhismaha jidka laamigaa ee dhex mara degmada iyo ka hor tagista wax walboo deegaanka nadaafad darro u keeni kara.
Dhawaan ayay ahayd markii golaha deegaanka degmada Burtinle ay gudoomiye u doorteen Liibaan Xirsi ka dib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore Faarax Salwe.